Lensbaby ကို စတွေ့ကတည်းကသဘောကျပေမယ့် ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံမတတ်နိူင်တာရော online ကဝယ်မှပဲ ရတာကြောင့်ရော ဘယ်mount အတွက်ဝယ်ရမယ်မှန်းဆုံးဖြတ်လို့မရတာကြောင့်ရော မဝယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ ခုကျတော့ အမတစ်ယောက်က သူ့ဆီမှာ lens တစ်ခု အပိုရှိနေတယ်။ သူက canon ပဲကိုင်တာ ဆိုတော့ သူလည်း မသုံး ၊ကျွန်တော့်မှာ fujifilm xt20 ရှိမှန်း သိသွားတော့ x mount နဲ့ lens အပိုကို ကျွန်တော့်ကို လက်ဆောင် ပေးလိုက်တာနဲ့ အတော်ပဲ ဖြစ်သွားရော။
Lensbaby trio ဆိုတဲ့အတိုင်း sweet, valvet နဲ့ twist သုံးခုစလုံးကို lens တစ် ခုထဲမှာသုံးလို့ရအောင် လုပ်ပေးထားတာပါ။ Fuji xt20 မှာ တပ်သုံးတာဆိုတော့ fuji ရဲ့ film simulation တွေနဲ့ ပေါင်းသုံးလိုက်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့။ Fuji မှာ တပ်သုံးဖို့ အရင်ဆုံး auto focus ကို manual ကို ပြောင်းရပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ setting ထဲမှာ shoot without lens ကို on ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် manual focus ဖြစ်တဲ့အတွက် focus peak ကို ဖွင့်ပေးရပါမယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Red ကိုပဲ သုံးပါတယ်။ ( Focus peak ဆိုတာ lens က manual focus ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်နေရာကို focus ဖြတ်တယ်ဆိုတာ သိဖို့အတွက် focus ဖြတ်တဲ့ နေရာကို အနီရောင်နဲ့ ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် )
Trio 28 ဆိုတဲ့အတိုင်း 28mm ဆိုတော့ fuji ရဲ့ crop factor 1.5 နဲ့ မြှောက်လိုက်ရင် 42mm full frame equivalence တော့ ရပါတယ်။ နောက်ပြီးf3.5 နဲ့ aperture အသေပါ။ lens ရဲ့ sharpness ကလည်း တော်တော်ကိုကောင်းပါတယ်။
တစ်ချို့ဓါတ်ပုံတွေကတော့ စမ်းစရာ မော်ဒယ် မရှိလို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ မော်ဒယ်လုပ်ထားရတာပါ။ရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးကို သည်းခံကြည့် ကြပါကုန်။
Sweetနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ပုံပါ ။ Photo Courtesy of Ye Thway.
Twist ကို ဘာသဘောကျသလဲဆိုရင် အလယ်က subject ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ ပတ်ပတ်လည်က အကုန် curve တွေ ဖြစ်ကုန်တာပဲ။ line တွေ များတဲ့နေရာမှာရိုက်မယ်ဆိုရင် တော်တော်လှမယ်လို့ ထင်ရတာပဲ။
Valvet ကတော့ ပုံရဲ့အလယ်မှာ focus ပြတ်ပြီး ဘေးတွေမှာ glow နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။
နောက်ဆုံးအမိုက်စားတစ်ခုက effect တွေ ကို သူ့ marking နေရာ တည့်တည့်မထားပဲ ကြားထဲထား လိုက်တဲ့အခါမှာ double exposure ပုံတွေ ထွက်လာတာကိုပဲ။
Camera နဲ့ပဲ creative optical effects တွေ ဖန်တီးလိုတဲ့သူတွေအတွက်တော့ lensbaby က တော်တော်လေးကို အသုံးဝင်ပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုကတော့ lensbaby ရဲ့ official tutorial ပါ။
fujifilm lensbaby. trio